Yintoni iTekhnoloji ebulala | Martech Zone
Lo ngumboniso wevidiyo omnandi ovela kwiSocialnomics kunye no-Eric Qualman, umbhali we Inkokeli yeDijithali: Iindlela ezi-5 ezilula zokuPhumelela kunye neempembelelo. Ndithatha ikota lokubulala. Nangona imisebenzi emininzi ilahlekile ngamaxesha amatsha, andithandabuzi ukuba kukho ukwanda kwenani lemisebenzi namathuba. Ngelishwa, sinemikhosi yezopolitiko nezoqoqosho ezizama ukumelana notshintsho kunokuziqhelanisa. Ngokombono wam othobekileyo, oko kuyicothisa inkqubela phambili yoyilo.
Nokuba yeyiphi na, yividiyo eyonwabisayo enengoma entle!
tags: ezentlaloiteknoloji iya kubulalaividiyo yabulala isaqhwithi sikanomathotholo